Habashoon bara Tewodros, Yohanis, Menelik, Haile Silasee yakka duguga sanyi Oromoo irrati raawwatan amalee raawachuuf Moresh wagane (Gala Gaday)fi dhabilee aadd adda lola Oromoo irrati labsan jiru. Bareefama Moresh(Gala Gaday) facasee fi Pltak Room Debtara, Abba Mela, Qale, Ethiopia karenti affars jeechdamu keessa Oromoo debisan garboonfachuu tarsimoo isaan qoophefacha jiran ergan xinxalee booda Oromoo lamii koof waan kan bareesuuuf dirqamee. Noe-Menelikoon yaakka abootiin isaan Oromoo irrati raawwatanf dhifma jeechuu manati Moresh Wagene (Gala Gaday) yaakkaa Oromoo irrati raawwatamee hunda haaluun dubii jijiree akka Oromoon isaan irrati jijireti dhiyeese jira. Moresh (Gala Gaday) fi Leeliftoon Menelik hundi Abootiin isaani waraa bara Menelik fi Haile Silasee Oromiyyati raamadaman Oromoo ajeessa turan dha.
Murni kun kara media isaan hundan lola Oromoo irrati labsan jiru. Oromoon amoo gochaa duguga sanyii jarii kun raawachuuf deeman of irra dhurkuuf waan hundan of qoophesuu qaba. Oromoon Nannoo horma utuu hin deemin diina booba isaa keessa ta’ee yakka isaati dalguuf qoopha’aa jiru of irra dhurkuuf qoophi ini goochuu qabuu:-
Ijoolen Nafxanyoota siiran Menelik fi Haile Silase keessa Oromiyaa keessa qubatan lafa Oromoo fi Oromiyya gadii dhisan ba’uu qabu;
Dhabbileen Nafxanyoota warii isaani Oromoo fxaa turan kami iyuu lafa Oromoo keessa akka hin sochoonee Oromiyan seeran dhorkuu qaba;
Ortodoksn lafa Oromoo 1/3 siiran durii keessati dhufatee abachuun akka barbadeeti bakka barbadeeti walda ijaratee Oromoo basasa ture fi jiru atataman ijoolee Oromooti walda dabarsuu ijoole Oromoo uumata isaan afaan Oromoon akka tajajilan goochuu;
Siiran durii keessa ta’ee ama haayyama Oromo malee Oromiyya keessa warii qubatan hundi hala dure tokko malee ba’uu qabu, kun jeechun Uumataa walloo rakko Beelaa fi Onngen Walloo Irra dhufee Oromiya keessa qubatee hin ilalalutuu;
Hawuultiin Menelik Handhura Oromiya Finfinnee irra atataman ka’uu qaba;
Yaakka siirna Nafxanyan Oromoo fi Uumatoota Kiba irrati dalgamee koreen qooratee seena dhugaa bareese yakkamtoon akka adabaman goodhu akka dhabatuu;
Namootaa Oromiyaa Seenan hunda maliif akka dhufan akka qooratamuu;
Lola isaan nu irrati banan lamsheesuuf Oromoo tarkanf fudhachu qabu:-
Oromoo Nafxanya Oromiyya keessa jiruu hunda irratti ugura ka’uun lola tokko malee Oromiyya keesa ari’achuu ni danda’aama. Yoo wal gurmeese, wali galee ugura akkasi ka’uu qaba :-
Habasha Amanuu fi waliin hojjechuu dhisuu, Diina irra bituu fi itti gurguruu dhisuu, Hotela diina lixee nyachuu dhisuu, Diina Oromooti firomuu dhisuu, Diinatti heerumuu fi diina fuudhuu dhisuu, Diinatti kara argisisu dhisuu, Diinatti lammi kee saxiluu dhisuu, Afaan diinan dubachuu dhisuu, Diina waliin ijaramuu dhisuu, Diina waliin sagaduu yookiin waqeefachuu dhisuu, Qoofati habsuun akka nami isaa hin awalee goochuu.
Maali Goonuu? Habasha (Abyssinaoota) Amansisu yaalun dhagaa guracha irrati finca’uu dha.
Oromummaa deebisan ijaruu, Tokkumaa ijoole Oromoo media irrati egalan kana lafa irratti gadii busuu,Tokkumma Gurmuu Haawwasa Oromoo deebisan ijaruu, Tokko Dhabbilee Oromoo atataman hala duree tokko male tokko gochuu, Qabsoo Oromoo kara baleesi kara booleesi biyya galchuu; Macaa fi Tullama fi Waqeefnaa deebisan ijaruu; Seena soba Habashan Oromoo irrati barreessa turan jijiramuu qaba; Uumataa Kushatic hunda amatamuu qabuu.
Falmataa Oromoo 1/01/2014
Moresh Amhara Wagane (Gala Gaday) iyyata soba